Lokanga sy Valiha: Tsy hoe zava-baovao izao atao izao | NewsMada
Lokanga sy Valiha: Tsy hoe zava-baovao izao atao izao
Efa tena ao anatin’ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana tanteraka izao? Efa samy mihevitra sy mihetsika amin’ izay efany sy afany ny tsirairay amin’izany. Na vondrona politika io,
na antoko politika, na mpa­­nao politika mande­ha irery izao aza. Samy manao izay hidirany sy hisisihany… Politika io, ady fiady sy ifampitadi­avana amin’izay hiadiana, handresena, hahazoana toerana. Samy manana ny fomba fiady.
Ao ny manomboka samy maka ho azy, na nifampihinana ny manta sy ny masaka ary nifampilela-tanana izao aza taloha. Samy te ho lohany? Na te hitsapa hery, raha afa-mandeha irery. Ny toerana ihazakazahana sy iadiana sisa no itoviana? Na ny tanindrazana iombonana… Eny, na ny vahoaka hoe iombonana sy mampiombona aza, efa ma­nomboka samy hananana izay ankolafiny noho ny hevitra sy fijery tsy mitovy.
Misy indray ny ma­nambatra hery, fa tsy matoky tena na tsy sahy mandeha irery. Na ma­tahotra ny ho very… Fiarahana na fihavanana karazana an-tery? Na ny sakay sy maso faran’izay nifanenjana sy nifanenjika teo aloha aza, mifanome tanana sy mifampisakambina ho azy amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao. Iombonana sy mampiombona ny mpifanandrina amin’ny tena, heverina ho tsy resy ho azy amin’izao?
Amin’izany rehetra izany, misy tsy miova firy amin’ny fomba fihetsika sy fiady. Lany hevitra ? Na izay afitsoka sy atao… Manaratsy ny hafa mba hahatsara endrika ny tena ? Na manakorontana ny amin’izao fotoana izao mba hananana fantenana ny hoavy na tsy azo hoe ho inona aza… Dia mandeha ho azy amin’ny sa­sany amin’izany ny karazana famendrofendroana amin’itsy sy iroa, fampitahorana, fampitandremana…
Raha tsy mandeha amin’izay iheverany azy, hono, ny raharaha, hikorontana ambony ambany ny tany aman-danitra. Ndeha arahina sy tanterahina izay lazainy? Tsy inona fa ny rafitra sy ny lalàna enti-miatrika ny fifidianana. Eo, ohatra, ny amin’ny Vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana (Ceni): mila ravana aloha na hoe soloina ny mpikambana ao aminy. Akaiky ny mpitondra, hono, ny ankamaroany. Mba marina?
Raha tsy izany, ny lalàna momba azy no mila hahitsy na hovaina. Nahoana izany no tsy niadiana tamin’ny fo­toan’androny? Na natao kitsapatsapa: rehefa tsy mety amin’ny tena, dia hoe mila ovaina. Toy iza­ny koa ny amin’ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny Fitsarana avo mom­ba ny lalàmpanorenana (HCC) hoe mila soloina na ovaina. Rehefa mety amin’ny tena vao ekena sy mety? Fanako­rontanana no atao…
Misy hatrany ny mi­tsapatsapa? Korontanina izay tsy metimety amin’ ny tena na tsy ahazoana tombondahy. Ialokalo­fana sy anamarinan-tena ny lalàna, ny rafitra, ny fomba fiasa… Nefa hahi­tsy sy hovaina impolo kely aza izany, misy fantatra izao fa tsy ho voafidy, na hirotsaka ho filoham-pokontany na ben’ ny Tanàna aza. Vao mainka fa ho filohan’ny Re­poblika… Efa nisy no
nitsapa izany indroa, in­telo… Ho fanimpiriny?
Misy ny minia mampitahotra sy manakorontana fotsiny, na inona na inona mitranga sy atao. Ny lalàna sy ny rafitra ary ny fomba fiasa hatrany no iadiana fo sy ialokalofana mialoha amin’ izay mety ho fahavoazana sy tsy fahombiazana efa tsinjotsinjo mialoha? Resy tsy miady ka mila vaniny sy manao antsojay… Manakorontana fo­tsiny izao aza mba hahazoana fanjakana tsy amin’ ny alalan’ny fifidianana.
Mbola misy ho azo sy ho voafandrika amin’izany ? Eny, na eo aza ny karazana tsy fahatomombanana etsy sy eroa. Inona loatra moa ity hoe tsy hitady seza na hiara-mitantana fa haka fahefana any amin’ny vahoaka? Na ahoana na ahoana, amin’ny alalan’ny fifidianana no hahazoana fahefana ara-dalàna avy amin’ ny vahoaka tompom-pahefana. Ny ankoatra an’izay, tsy fanonganam-panjakana ve?
Inona koa ity hoe tsy mitady seza fa haka fahefana ? Mbola karazana fandrebirebena sy fandrabirabiana amin’ny fiketrehana korontana ihany: ny fahazoana fahefana no hakana seza sa ny fakana seza no hahazoana fahefana? Na misy mihevitra ny vahoaka ho bado sy zaza bodo… Ndeha handrombaka fahefana any amin’ny vahoaka tsy amin’ ny alalan’ny fifidianana? Ho hita eo fa tsy hoe zava-baovao ny atao…